China CS6712D Digital Potassium Ion Sensor fekitori uye vagadziri | Chunye
CS6712D Dhijitari Potassium Ion Sensor
Iyo potasiumoni ion inosarudza electrode inzira inoshanda yekuyera iyo potassium ion yezviri musampuli. Potassium ion inosarudza ma electrode anowanzo shandiswa mumidziyo yepamhepo, senge maindasitiri epamhepo potasium ion kugadziriswa kwekutarisa. , Potassium ion inosarudza electrode ine zvakanakira kuyerwa zvakapusa, nekukurumidza uye nemhinduro kwayo. Inogona kushandiswa nePH mita, ion mita uye online potasium ion analyzer, uye zvakare inoshandiswa mu electrolyte analyzer, uye ion inosarudza electrode detector yekuyerera jekiseni analyzer.
Kushanda: Kufungisisa kwe potassium ions mune feedwater kurapwa kweakanyanya-kumanikidza emhepo mabhaira mune emagetsi magetsi uye emagetsi emagetsi. Potassium ion inosarudza nzira yemagetsi; potasiumiyoni ion inosarudza electrode nzira yekumisikidza ye potassium ions mune mamineral mvura, yekumwa mvura, pamusoro pemvura uye yegungwa; Kuiswa kwe potassium ion mune tii, uchi, chikafu, mukaka hupfu uye zvimwe zvigadzirwa zvekurima; potasiumoni ion inosarudza electrode nzira yekumisikidza ye potassium ions mumate, serum, weti uye mamwe masampuli ehupenyu; potasiumiyoni ion inosarudza electrode nzira yekumisikidza zvemukati mune zvedongo mbishi zvigadzirwa.
•CS6712D potassium ion sensor yakasimba membrane ion inosarudza ma electrode, anoshandiswa kuyedza potassium ions mumvura, inogona kukurumidza, yakapusa, yakarurama uye ine hupfumi;
•Iyo dhizaini inotora musimboti weimwe-chip yakasimba ion inosarudza electrode, ine yakanyanya kuyera kurongeka;
•PTEE yakakura-seepage interface, isiri nyore kuvharira, anti-kusvibiswa Inokodzera kurapwa kwemvura yakasviba muindasitiri ye semiconductor, photovoltaics, simbi, nezvimwewo uye kusvibiswa sosi yekudonhedza kutarisa;
•Yakakwira-mhando yakatumirwa imwe chete chip, chaiyo zero poo ingangoita pasina kukukurwa;
Simba / Outlet
Ion nzira yemagetsi
Dhayamita 30mm * kureba 160mm
Semuenzaniso calibration, yakajairwa mvura calibration
Yakajairwa 10m tambo kana kuwedzera kusvika 100m
General kushanda, rwizi, nyanza, yekumwa mvura kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nezvimwe.
Pashure: Kunyudza Pamhepo Type Turbidity Sensor
Zvadaro: CS6710D Dhijitari Fluoride ion Sensor
Dhijitari Nitrite Sensor RS485
CS6710D Dhijitari Fluoride ion Sensor
CS6721D Dhijitari Nitrite Sensor
CS6714D Dhijitari Ammonium Nitrogen Ion Sensor
CS6718D Dhijitari Yekuomarara Sensor (Ca Ion)
Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Kufambisa TDS Sensor, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Chlorophyll Sensor, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Ph Sensor Electrode,